Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti eriri carbon na metal.
Ihe dị iche n'etiti eriri carbon na metal.
N'ime ọtụtụ ihe, carbon fiber composites (CFRP) ka a na-akwụkwu ụgwọ maka ike ha dị oke mma, isi ike, nguzogide corrosion, na ike ọgwụgwụ.
Njirimara dị iche iche dị n'etiti ihe mejupụtara carbon fiber na ihe igwe na-enyekwa ndị injinia echiche imewe dị iche iche.
Ihe na-esonụ ga-abụ ntụnyere dị mfe n'etiti ihe ndị mejupụtara carbon fiber na njirimara ọla ọdịnala na ọdịiche.
1. Isi ike na ike dị iche iche
E jiri ya tụnyere ihe ọla, ihe ndị nwere eriri carbon nwere ịdị arọ, ike dị elu, yana isi ike.Modul nke eriri carbon nke dabere na resin dị elu karịa nke aluminom alloy, na ike nke eriri carbon nke resin dị elu karịa nke aluminom alloy.
Ngwa igwe na-abụkarị otu nwoke ma ọ bụ nwanyị, enwere mkpụrụ ma ọ bụ ọnọdụ mkpụrụ ọnọdụ.Na eriri carbon nke otu oyi akwa nwere ntụzịaka doro anya.
Ngwongwo eji arụ ọrụ n'akụkụ ntụzịaka eriri bụ 1 ~ 2 iwu dị elu karịa ndị nọ n'akụkụ ntụzịaka eriri kwụ ọtọ na njiri ogologo ogologo na nke transverse, na akụkụ mgbakasị ahụ na-agbanwe agbanwe tupu agbajie.
Ya mere, ihe eji eme eriri carbon nwere ike họrọ akụkụ nke ịtọgbọ, nhazi nhazi, na usoro ntinye nke otu-layer site na tiori efere lamination.Dị ka e ji mara nke nkesa ibu ibu, ike na ike ịrụ ọrụ nwere ike nweta site imewe, mgbe omenala metal ihe nwere ike ịbụ thicken.
N'otu oge ahụ, enwere ike nweta ihe siri ike na ike dị n'ime ụgbọ elu yana ihe pụrụ iche na-ejikọta ya na ụgbọ elu.
3. Nguzogide corrosion
E jiri ya tụnyere ihe ọla, ihe carbon fiber nwere acid siri ike na nguzogide alkali.Carbon fiber bụ ihe owuwu microcrystalline nke yiri kristal graphite nke emere site na eserese eserese na oke okpomọkụ nke 2000-3000 Celsius C, nke nwere nnukwu nguzogide corrosion ọkara, ruo 50% hydrochloric acid, sulfuric acid ma ọ bụ phosphoric acid, modulus na-agbanwe, ike, na dayameta na-anọgide na-agbanweghi agbanwe.
Ya mere, dị ka ihe na-agba ume, eriri carbon nwere nkwa zuru oke na nguzogide corrosion, resin matrix dị iche iche na nguzogide corrosion dị iche.
Dị ka carbon fiber na-emekarị epoxy, epoxy nwere nguzogide ihu igwe ka mma ma na-ejigide ike ya nke ọma.
4. Mgbochi ike ọgwụgwụ
Nsogbu mkpakọ na ọkwa dị elu bụ isi ihe na-emetụta ike ọgwụgwụ nke ihe mejupụtara carbon fiber.A na-edobekarị ihe ike ike ọgwụgwụ na ule ike ọgwụgwụ n'okpuru nrụgide (R = 10) na nrụgide nrụgide (r = -1), ebe a na-edobe ihe ndị ahụ na-ahụ maka ike ọgwụgwụ n'okpuru nrụgide (R = 0.1).E jiri ya tụnyere akụkụ ígwè, karịsịa akụkụ aluminom alloy, akụkụ carbon fiber nwere ezigbo ike ọgwụgwụ.N'ọhịa nke chassis ụgbọ ala na ihe ndị ọzọ, ihe mejupụtara carbon fiber nwere uru ngwa kachasị mma.N'otu oge ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị mmetụta ọ bụla na eriri carbon.Usoro SN nke ule a ma ama bụ otu ihe ahụ nke ule a na-ahụghị anya na ndụ dum nke ọtụtụ eriri carbon laminates.
Ka ọ dị ugbu a, matriks carbon fiber tozuru oke bụ nke resin thermosetting, nke siri ike ịwepụta ma jiri ya mee ihe ọzọ mgbe ọ gwọchara ya na njikọ ya.Ya mere, ihe isi ike nke mgbake carbon fiber bụ otu n'ime ihe mgbochi nke mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yanakwa nsogbu ọrụ aka nke chọrọ ka a dozie ngwa ngwa maka ngwa ngwa ngwa ngwa.Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime usoro eji emegharị ihe n'ụlọ na ná mba ọzọ nwere ọnụ ahịa dị elu ma sie ike ịmepụta ụlọ ọrụ.Walter carbon fiber na-arụsi ọrụ ike na-enyocha ihe ngwọta a na-emegharịghachi, emechaala ọtụtụ ihe atụ nke mmepụta nnwale, mmetụta mgbake dị mma, yana ọnọdụ mmepụta oke.
E jiri ya tụnyere ihe igwe ọdịnala, ihe carbon fiber nwere uru pụrụ iche n'ihe eji arụ ọrụ, dị fechaa, imepụta ihe, na ike ọgwụgwụ.Otú ọ dị, mmepụta mmepụta ya na mgbake siri ike ka bụ ihe mgbochi nke ngwa ya ọzọ.A kwenyere na a ga-eji eriri carbon na-emewanyewanye ya na mmepụta teknụzụ na usoro.